အီးယူအဖွဲ့က အမေရိကန် သွင်းကုန်များ အပေါ် လက်တုံ့ပြန် အခွန် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် စတင် တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည်
လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇) မူရင်း အပေါင်သဘောမျိုး ယူထားသော်လည်း မိုးစပါးချေးငွေ ထုတ်ချေးမှု လျော့နည်းသွားခြင်း မရှိဘဲ ယခင်နှစ်ကထက် ထုတ်ယူသူများ
ကိတ်စပိတ်၏ ပရဟိတအသင်း သေကြောင်းကြံမှုများကို ကာကွယ်ရန် ဒေါ်လာတစ်သန်း လှူဒါန်းမည်
ဂျိုလီ၏ ရုပ်ရှင်တွင် သားသမီး နှစ်ဦး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ကို ဘရက်ပစ် လက်မခံ
ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် ကလေးများအတွက် ဒေါ်လာတစ်သိန်း လှူဒါန်းခဲ့သော ဂျော့ကလူးနီတို့ ဇနီးမောင်နှံ
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ မဝင် ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး သတင်းစာ ရှင်းလင်း ထုတ်ပြန်မည်
(၂၁)ရာစု ပင်လုံတတိယ အစည်းအဝေးတွင် မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားမည်ဖြစ်သော်လည်း အားလုံးပါ၊ မပါ ဆွေးနွေးရဦးမည်
ကော့သောင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ကား သစ်ပင် ဝင်တိုက်မိ၊ ယာဉ်ပေါ်ပါ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး သေဆုံး
အိမ်ဆောက်ရန် မြေတူးရာမှ ရှေးဟောင်း ပန်းကန်ပြားဟု ယူဆရသော ကြေးပန်းကန်ပြား ၃၃ ချပ် တူးဖော်ရရှိ
ညောင်ဦးမြို့နယ်၌ ချုံနွယ်များ ရှင်းလင်းရာမှ တွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်း စေတီတော်များ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် အလှူရှင်များ လိုအပ်နေ
ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဇွန် ၂၁ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ (အီးယူ)က အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် သွင်းကုန်ခွန် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုကို ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် စတင်ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အီးယူ၏ စတီးနှင့် အလူမီနီယံအပေါ် အမေရိကန်က ယခုလအစောပိုင်းက သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင့်မှုကို လက်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဥရောပကော်မရှင်က ပြောကြား လိုက်သည်ကို ရိုက်တာသတင်းက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ...
IN: Business BY: M Bwe 22 Jun, 2018
မော်လမြိုင်၊ ဇွန် ၂၁ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးစပါးထုတ်ချေးငွေများကို ထုတ်ချေးရာတွင် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ(၇)မူရင်းကို အပေါင်သဘောမျိုးအဖြစ်ယူပြီး ထုတ်ချေးခဲ့သော်လည်း ထုတ်ချေးမှုလျော့ နည်းသွားခြင်းမရှိဘဲ ယခင်နှစ်ကထက် ထုတ်ချေးမှုများပြီး ယနေ့အထိ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထုတ်ချေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း မွန် ပြည်နယ် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုး ရေးဘဏ်ခွဲမှ ပြည်နယ်မန်နေဂျာ ဦးကျော်စွာလှိုင်က ပြောကြားသည်။ ...
IN: Business BY: AHO 22 Jun, 2018
IN: Regional BY: YWN 22 Jun, 2018
စစ်ကိုင်း ရတနာစေတီ ဆင်များရှင် ဘုရားကြီးအား လက်ရှိအမြင့်ထက် အမြင့်ဥာဏ်တော် ၃၅ ပေ တိုးမြှင့် တည်မည်
IN: Life BY: DW 22 Jun, 2018
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်တွင် သက်ငယ် မုဒိမ်းနှင့် လုယက်မှုများ များပြားလာသောကြောင့် ရဲကင်းများချ၍ ကျေးရွာများ၌ မှုခင်းကျဆင်းရေး ဟောပြောပွဲများ လစဉ် ကျင်းပသွားမည်
IN: Regional BY: DW 22 Jun, 2018
IN: Political BY: HWA 22 Jun, 2018
IN: Political BY: HWA,MP 22 Jun, 2018
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အထူး ကိုယ်စားလှယ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အပြုသဘောဆောင်၊ အရေးပါသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေနိုင်ဟုဆို
IN: Political BY: NT 22 Jun, 2018
အစီရင်ခံစာပါ ဆလုံ တိုင်းရင်းသားများကို သီးသန့်ဇုန် နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် ဆိုသည့်အချက် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ကန့်ကွက်
စိုက်ပျိုးမြေတွင် ကုမ္ပဏီက ကျူးကျော်နေသည်ကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ပါလျက် ဌာနဆိုင်ရာများ လျစ်လှူရှုနေ ဒေသခံပြည်သူများ ကျူးကျော် စိုက်ပျိုးပါက တရားရုံးများတွင် တရားစွဲပြီး ထောင်ချခံနေရ
မြို့တော်စည်ပင်၌ ပြည်သူလူထု တင်မြှောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်မှုသည် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အရေးကြီးဟု စစ်တမ်းတစ်ရပ်ဖော်ပြ
ညောင်ဦး၊ ဇွန် ၂၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ် မြောင်ကျေးရွာနှင့် လယ်ကန်ကျေးရွာကြား၌ ဒေသခံများက ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများ ရှင်းလင်းရာ အေဒီ ၁၃ ရာစုခန့်က တည်ထားခဲ့သည့် ရွှေပုံသာရှေးဟောင်းစေတီတော် ၁...
မန္တလေး တောင်တော် ရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ လုံခြုံရေးပိုင်း စောင့်ကြည့်ရန် CCTV ကင်မရာများကို အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့ တပ်ဆင်
မကွေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရင်ခွင်မဲ့ ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဆွေးနွေး
မန္တလေး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဟာအရှေ့ရပ်ကွက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေမီတာ အလုံး ၁ဝဝဝ ခန့် အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးနေ
လှိုင်သာယာ ငွေပင်လယ် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်း တည်ဆောက်မည့် အပေါ် မြေပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများ သဘောတူပြီ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင် အများအပြားရှိနေ၊ မြေနေရာ၊ လုပ်သားအင်အား အားသာချက်များနှင့် ကိုရီးယား ခေတ်မီနည်းပညာ ပေါင်းစပ် လုပ်ကိုင်ပါက အောင်မြင်နိုင်မည် ဟုဆို
နိုင်ငံအတွင်း အထည်ချုပ် စက်ရုံပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ရှိ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အချို့တွင် အထည်ချုပ် စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင်မည်
မြန်မာ့ ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ၊ ပြည်ပရတနာ ကုန်သည် သုံးထောင်ကျော် စာရင်းပေးသွင်းထား
အဖွင့်ပွဲကထက် ပိုကောင်းသော ခြေစွမ်းဖြစ်ရန် နေမာမျှော်လင့်၊ VAR အတွက် ဘရာဇီး ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ ကန့်ကွက်မှုကို ဖီဖာ ပယ်ချ
ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနေမာက ဆွစ်ဇာလန်နှင့်သရေကျခဲ့သောပွဲထက် ပိုကောင်း သောခြေစွမ်းကို ကော်စတာရီကာနှင့်ပွဲတွင် ပြသနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောခဲ့သည်...
IN: Sport BY: KKW 22 Jun, 2018
ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် အပြေးနှုန်း အများဆုံး ရုရှား အသင်းဖြစ်နေ
စီရော်နယ်ဒို၏ ဂျာစီကို တောင်းခဲ့သည့်ဒိုင် ဝေဖန်ခံရ
စီရော်နယ်ဒို၊ မက်ဆီတို့၏ ခြေအဆင့်မျိုးပြနိုင်ရန် ကိန်း ကြိုးစားမည်
လက်ကျန်ပွဲတိုင်းက ဗိုလ်လုပွဲများဟု ဘရာဇီး ကွင်းလယ်လူ ကော်တင်ဟို ဆို
IN: World News BY: M Bwe 22 Jun, 2018
လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီတွင် လစ်လပ်သွားသော အမေရိကန်၏ နေရာအတွက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံကို အစားထိုးမည်
အိမ်ခြံမြေ ဆောက်လုပ်ရောင်းချသူ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား မီလျံနာ ရွန်မက်ဒစ် ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချမှတ်ခံရ
ပင်လယ်ထဲ မျောပါနေသော ဒုက္ခသည် ၅၂၂ ဦးကို ကယ်ဆယ်လာသည့် အီတလီကမ်းခြေစောင့် တပ်သင်္ဘော စစ္စလီကျွန်း ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် ခရီးသည်တင် ကူးတို့သင်္ဘော တိမ်းမှောက်၊ လူနှစ်ဦးသေဆုံး၍ ၁၈ဝ ဦးခန့် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိ
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ အမေရိကန် နုတ်ထွက်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လက်နက်ငယ်ပေါင်း တစ်ဘီလီယံကျော် အထိ ရှိနေကြောင်း စစ်တမ်း ဆို
ဗြိတိန်တစ်ဝန်းတွင် ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ်ထက် နောက်မကျစေဘဲ ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ကားများ ပိတ်ပင်ရန် လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် တိုက်တွန်း
တစ်နိုင်ငံလုံး အထိတ်တလန့် အံ့သြဒေါသ ထွက်နေသည့်ကြားက ထရန့်က ၎င်း၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပေါ်လစီကို ရှေ့ ဆက် လုပ်ဆောင်
ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး
အမေရိကန် ဦးဆောင်သော မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဆီးရီးယား စစ်တပ် ပစ်မှတ်ကို ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်
ထိုင်း သစ်တောရေးရာဌာန အကြီးအကဲ အဂတိ လိုက်စားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေး
IN: Entertainment BY: M Bwe 22 Jun, 2018
IN: Entertainment BY: ဝေးမင်း 22 Jun, 2018
ဂျိုဒီမာ့ရှ်၏ အချစ်တော်ခွေးကလေး အဆိပ်ခတ်ခံရ
ပေါလ်မက္ကာတနေ၏ သီချင်းသစ်နှစ်ပုဒ် ထွက်ရှိ
<<<< ရွှေကူမေနှင်း >>>> ရှေ့ ဘာဖြစ်မည်ဟု ကြိုတင်ဟောကိန်း ထု...
IN: Articles BY: ရွှေကူမေနှင်း 31 May, 2018
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း NLD အနေ ဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုများ ပိုမိုမြန်ဆန်လာရေးအတွက် ဝန်ကြီ...
IN: Articles BY: အာကာထက် 31 May, 2018
( ၁ ) ''နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည့် သဲအိ...
IN: Articles BY: တက္ကသိုလ်စိန်တင် 24 May, 2018
ဒီမိုကရေစီအစိုးရသက်တမ်း၏ ငါးနှစ်တာအချိန်သည် ၂ဝ၂ဝ တွင် ပြည့်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဒီချုပ်အစိုး...
IN: Articles BY: မင်းဗညား 24 May, 2018
ရွာဆိုမှတော့ တောအရက်သောက်ရ တာပေါ့။ တချို့က ချက်အရက်လို့ ပြောကြ သေးတယ်။ အရက်ဆိုမှတော့ ''ချက်''ရတာ ချည...
IN: Articles BY: ကိုလေးမြတ် 21 May, 2018
ရွှေကူမေနှင်း ******************* ' မိုးတွေ ရွာပြီ' တစ်လောကလုံး ပြုံးရွှင်ဝမ်းမြောက်ကြရတယ်။ ...
IN: Articles BY: ရွှေကူမေနှင်း 18 May, 2018
စစ်ကိုင်း၊ ဇွန် ၂၁ ရွှေကျင်တွဲဖက်သာသနာပိုင်သဒ္ဓမ္မသီတဂူ ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင် ဥာဏိဿရ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ၂ဝ၂...
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၁ ဇွန် ၂၁ ရက်တွင်ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်...
IN: Life BY: TTHL 22 Jun, 2018
ရွှေပြည်သာ၊ ဇွန် ၂၁ ပီတိအခမဲ့ဆေးခန်းခုနစ်ခုအတွက် ပီတိလူမှုကူညီရေးအသင်းမှ လစဉ်ငွေ ကျပ်သိန်း ၇ဝ ကျော်ဖိ...
IN: Life BY: SMO 22 Jun, 2018
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂ဝ ယခုပညာသင်နှစ်၌ အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်း ထောင်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း တက်ရောက်နေသူမှာ လက်ရှိ...
IN: Life BY: ATK 21 Jun, 2018
တာချီလိတ်၊ ဇွန် ၂ဝ ၂ဝ၁ဝ- ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင်သွား ရောက်မှု၊ ...
IN: Life BY: TT 21 Jun, 2018
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂ဝ မြန်မာပြည်ဟုန် အိမ်းပီနံအိတ် စက်ရုံလုပ်သားများသည် အချိန်ပိုလုပ်ခများရရှိရေး အပါအဝင...
IN: Life BY: MO 21 Jun, 2018
IN: Others BY: WYHW 22 Jun, 2018
IN: Others BY: ZZ 22 Jun, 2018
မြန်မာဘက်သို့ အွန်လိုင်း ဘောလုံးလောင်းကစား ထပ်ဆင့် လွှင့်စက် တပ်ဆင်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသားကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ
IN: Others BY: TT 22 Jun, 2018
ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အပိုင်းတွင် အားနည်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး ပြောကြား
ကျူးကျော် နေထိုင်သူများအား အကြမ်းဖက် နှင်ထုတ်ခြင်း မပြုရန် အပါအဝင် အချက်ခြောက်ချက်ကို တိုင်းအစိုးရထံ တောင်းဆို
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ရသည့် ဌာနအကြီးအကဲများ အဂတိ လိုက်စားမှု အများဆုံးဖြစ်နေသဖြင့် ကာကွယ် တားဆီးမှုများပြုလုပ်နေ
အသစ်ဝင်လာမည့် ဆရာဝန်များကို အစိုးရဆေးရုံများတွင် နှစ်နှစ် သို့မဟုတ် သုံးနှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပေးရန် ကျန်းမာရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မေတ္တာရပ်ခံ
မိုးထိ မိုးမိ ရွှေလုပ်ကွက် ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ရေး နေပြည်တော်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်